Sida Lacag Looga Sameeyo Guriga Sida Ilmaha 2021 l 15 Siyaabaha Ugu Fiican.
Bogga ugu weyn Sida Looga Sameeyo Lacag Guriga Markaad Yartahay 2022 | 15-ka Hab ee ugu Wanaagsan.
Sida Looga Sameeyo Lacag Guriga Markaad Yartahay 2022 | 15-ka Hab ee ugu Wanaagsan.
Fahamka sida lacag looga sameeyo guriga sidii cunug waxay noqon kartaa hawl aad u adag. Carruur badani waxay rabaan inay sameeyaan xoogaa xoogaa lacag ah oo dheeri ah iyagoon ku mashquulin wax sharci darro ah oo maadaama ay tahay inay gaaraan da 'cayiman kahor inta aysan ka shaqeyn meelaha qaarkood iyo xaqiiqda ah in 9 illaa 5 aysan ka ahayn su'aasha, hadda , waxay u muuqataa wax aan macquul ahayn.
Kani waa boosteejo “Ha ka daalin weli”, maadaama ay jiraan habab kala duwan oo lacag looga helo guriga sidii ilmo hadda oo aan hore u jirin, farsamada iyo horumarka intarneedka ayaa wax badan fududeeyey si loo gaaro.
Da'da cusubi waxay hadda soo bandhigaysaa fursado badan oo aan hore u jirin jiilkii hore. Qaar ka mid ah siyaabaha lacagta lagu sameeyo ayaa laga yaabaa inay weli leeyihiin shuruudo da'da laakiin waxaad weli heli kartaa dariiqa hareeraheeda adoo u oggolaanaya waalidkaa ama mas'uuliyiintaada inay ku soo galaan qorshahaaga, habkan waxay awoodi doonaan inay ku hagaan.
Helitaanka siyaabo aad lacag ku samayn karto markaad caruur tahay guriga waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxay ku baraysaa qiimaha dadaalka, go'aan qaadashada, iyo dadaalka, taas oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalkaaga si wanaagsan, ka sokow waxay sidoo kale kuu abuureysaa dareenkan madaxbannaanida maaliyadeed.
Diyaar ma u tahay in aad quusto oo fiiriso siyaabaha ugu wanaagsan ee lacag lagu heli karo sida ilmo guriga ka yimid? Aynu bilowno laakiin ka hor markaa waa inaan wax yar toosnaa.
Maxaad lacag ugu baahan tahay caruur ahaan?
Sidee ku bilaabataa?
15 Siyaabaha Ugu Fiican Ee Lacag Looga Helo Guriga Sida Ilmo 2021
1. Sahan qaado
2. Fadhiga xayawaanka
3. Ciyaar Ciyaar Online ah
4. Iibi Sawirkaaga
5. Iibi naqshadahaaga
7. Bilow YouTube Channel
8. Fiiri shaqooyinka Freelance Online -ka
9. Noqo Baraha Bulshada/Saameynta Sumadda
10. Naqshadaynta funaanadaha
11. Abuur oo iibso Sawirada
12. Iibi Farshaxanka iyo Dahabka
13. Sameynta Muusikada
14. Barnaamijyada Imtixaanka
15. Iibso Alaabta La Adeegsaday/ Gaboobay onlayn
maxaad do aad u baahan lacag as a kid?
Ka sokow gunnada caadiga ah, oo qaarkiin ka helaan waalidkaa, waxaa laga yaabaa inaad weli rabto inaad hesho dakhli dheeraad ah si aad u daboosho kharashyadaada si kastaba ha ahaatee, iyo sidoo kale inaad awooddo laba shay oo aad rabto.
Waxay noqon kartaa waxyar inaad naftaada u hesho dawayn, sida jalaatada, keega, buugaagta aad jeceshahay, kabaha, ciyaaraha cusub, dharka, maalgelinta mashruuc dugsi, ama xitaa kaydinta ama dhammaystirka lacagta safarka dal qalaad asxaabtaada iyo qoyskaaga.
Waxaad sidoo kale heli kartaa labbiska quruxda badan ee prom ama tuxedo bir ah sidoo kale waxaad ku dari kartaa kaydka kulliyadda, liisku waa mid aan la dhammayn karin. Dhammaan adiga ayay kugu xiran tahay.
Sidee do aad heli bilaabay?
Waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo maskaxda ku haya fikrado, ogaanaya waxaad rabto inaad sameyso, iyo agabyada kuu diyaar ah inaad bilowdo.
Kala hadal waalidkaa ama mas'uulkaaga, ma doonaysid inaad bilowdid adiga oo aan oggolaansho ka haysan maxaa yeelay waxaad aakhirka u baahan kartaa kaalmadooda.
Samee cilmi-baaris ku saabsan wax kasta oo aad go'aansatid inaad sameyso, oo raadso dhexdhexaadin aad ku heli karto dhageystayaal ku taageera. Waxay noqon kartaa iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, waxaad sidoo kale u sheegi kartaa xubnaha qoyskaaga, deriskaaga, iyo asxaabta.
Ugu dambayntii, laad bilaw mashruucaaga.
Waxaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee aad lacag uga heli karto guriga adiga oo caruur ah 2021.
15 Best Siyaabaha Ku samee Money From Bogga ugu weyn As A kid in 2021
Qaado a Survey
Play an online ciyaarta
Iibiya aad Photo
Iibiya aad naqshado
Hubi baxay online banaan shaqo
Noqo bulsho warbaahinta/ brand saameyn
Iibiya Farshaxan iyo gogo 'dahab ah online
Iibiya jir items online
XIDHIIDHKA: 20ka Talo ee Cashuurta Ganacsiga Yaryar ee ugu Wanaagsan | 2022
1. Qaado sahan
Sahanku waa mid ka mid ah siyaabaha ganacsiyadu u helaan jawaab celin ku saabsan alaabtooda iyo adeegyadooda. Ganacsiyadu waxay isticmaalaan sahan-qaadayaasha si ay u helaan macluumaadka ku saabsan waxqabadka alaabtooda ama adeegyadooda, inta badan kuwan xog-ururinta ah waxay helaan lacag ama hadiyado.
Kani waa hal hab oo lacag lagu kasbado sidii ilmo yar oo guriga jooga mana u baahna waqti badan ama ku lug leh shaqo badan oo adag.
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysid waa inaad iska qortaa goob sahan online sida Swagbucks ama Survey Junkie, in kasta oo da'da looga baahan yahay tan ay tahay 13+, waxaad caawin kartaa waalidkaa haddii aad ka hooseyso da'daas oo aad weli rabto inaad sii waddo.
Waxaad kasban kartaa inta u dhaxaysa $ 5 iyo $ 55 sahan kasta ama waxaad heli kartaa alaab hadiyado ah.
2. Butros fadhiiso
Haddii aad da 'weyn tahay si aad u maamusho xayawaanka sida eeyaha ama bisadaha adigoon kormeereyn oo aad jeceshahay, markaa waxaad xayawaankaaga ku fadhiisan kartaa xilliga firaaqadaada.
Waxaad iska qori kartaa goobaha sida Rover ama Soo qaado si aad ula xiriirto dadka leh xayawaanka guriga, waxaad sidoo kale u sheegi kartaa deriskaaga haddii ay yihiin noocyada mashquulka ah.
Qaybta wanaagsani waa inaad guriga u kaxayso laakiin iska hubi inaanad guriga ku haysan qof xasaasiyad ku haya eeyaha ama bisadaha iyo xayawaanka kale
Waxaad kasban kartaa celcelis ahaan $ 25 - $ 85 iyada oo ku xidhan waqtiga lagu qaatay daawashada iyaga.
Carruur badan ayaa jecel ciyaaraha. Waa hab qabow oo lagu nasto oo lagu madadaasho keligaa ama saaxiibbada. Laakiin waxaad aadi kartaa masaafada dheeriga ah ee lacag sameynta inta aad sameyneyso mid ka mid ah waxyaabaha aad ugu jeceshahay adduunka.
Haddii aad ciyaaraha ku ciyaarto casrigaaga casriga ah ama aad leedahay hab-ciyaareed, waxaad sidoo kale u rogi kartaa saacadahaas aad ciyaareysay lacag dheeraad ah.
Goobaha sida Dhexdhexaad, Applike, AppNana, iyo Cashcrates waa dhowr goobood oo online ah oo bixiya adiga ciyaaraha.
Markaa ku raaxayso inaad hesho $10 – $20 dheeraad ah saacaddii ciyaarista ciyaaraha.
4. Iibiya aad Photo
Sawir qaadashadu waa hab kale oo cajiib ah oo hal abuur leh oo lacag lagu sameeyo. Haddii aad haysato kamarad ama taleefan casriga ah oo leh lens qabow oo aad jeceshahay inaad sawirro madadaalo ah u qaadato, markaa waxaad sidoo kale bilaabi kartaa inaad lacag ka sameyso.
Sawiradaadu waxay noqon karaan muuqaalo muuqaal qurxoon, moodo, qaab dhismeed ama xataa sawiro.
Ganacsiyo badan iyo dadku waxay jecel yihiin adeegsiga sawirro qurux badan, runtii uma baahnid inaad wax badan qabato si aad u bilowdo, iska qor goobaha sida Shutterstock, Gaaritaanka, Dreamstime, ama Sawirada Istock.
Dhinaca hoose ee boggagaas waa in aad tahay 18 jir ka hor inta aanad is-diiwaangelin, wax kasta oo da'dan ka hooseeya markaa waa inaad raadsataa kaalmada waalidkaa ama mas'uuliyiinta si ay kuu caawiyaan ilaa aad ka qaangaarayso .
Waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa gacmahaaga warbaahinta bulshada si aad u hesho dhagaystayaal badan.
Sawir kasta oo la iibsaday wuxuu kaa dhigi karaa ilaa $ 0.25 - $ 0.50 iyo ka badan inta faylalkaaga internetka uu korayo. Qaybta xiisaha leh ayaa ah in sawirradaada la iibsan karo dhowr jeer.
5. Iibiya aad naqshado
Miyaad jeceshahay abuurista naqshado farshaxan oo qurux badan? Haddii aad tan u samaynaysay hiwaayad oo aad raadinayso siyaabo aad lacag uga samaysato guriga adiga oo carruur ah, markaa waa waqtigii aad kor u qaadi lahayd ciyaartaada adoo iska diiwaangelinaya goob kasta oo internetka ah si kor loogu qaado farshaxankaaga.
Society6 Waa mid ka mid ah goobtaas oo aad ku iibin karto naqshadahaaga, waxaa loo isticmaali karaa taleefannada, koofiyadaha wejiga, sida stickers, iwm. Goobtu waxay ku siinaysaa 10% qiimaha iibka, taas oo kala duwanaan karta iyadoo ku xiran shayga.
Tababarka sidoo kale waa hab fiican oo lacag looga sameeyo guriga markaad caruur tahay. Haddii aad aad ugu fiican tahay Xisaabta, Sayniska, Ingiriisiga ama maaddo kale waxaad bari kartaa ardayda da'da yar ama ardayda aad isku fasalka tihiin oo waxaad ku martiqaadi kartaa guriga fasallada.
Waxaad sidoo kale wax ku bari kartaa onlaynka, ka raadin kartaa caawinta waalidkaa sidii aad u heli lahayd goobo wanaagsan oo internetka ah oo loogu talagalay shaqooyinka umeerin. Fiiri Daryeelka Macallinka, Hel qolka waxbarashada, Tutapoint ama Kaplan.
Waxaad ka kasban kartaa ilaa $ 20 illaa in ka badan $ 80 saacaddii shaqooyinka umeerinta.
7. Start YouTube Channel
Markaad caruur tahay, waxaad yeelan kartaa kanaalkaaga YouTube. Waxay noqon kartaa fiidyowyo ku saabsan shay kasta laga soo bilaabo ciyaarista muusikadda ilaa ciyaaraha, gitaarka, furfuridda alaabta carruurtu ku ciyaarto, majaajilada iwm.
Bilaabidda kanaalka YouTube ee ka yar 18 sano waxay u baahan tahay oggolaansho waalidnimo. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kala hadasho fikraddaada waalidkaa ama mas'uulkaaga.
Sida kaliya ee lagu bilaabi karo lacag -gelinta fiidiyahaaga ayaa ah inaad ku xirto kanaalkaaga YouTube koonto AdSense oo la oggolaaday oo uu leeyahay waalid ama mas'uul ka weyn 18 jir.
Dunida Ryan waa kanaalka YouTube -ka ee carruurta oo ay ka muuqdaan Ryan, waalidkiis, iyo walaalaha mataanaha ah.
Sida laga soo xigtay Forbes, Ryan kaji wuxuu kasbaday ku dhawaad ​​$ 30 milyan kanaalkiisa kaas oo leh in kabadan 40 milyan oo macaamiil ah. Waxaa ku jira fiidyowyada dib -u -eegista ku saabsan alaabta carruurtu ku ciyaarto ee cusub iyo tijaabooyinka sayniska guriga. Arrinta la yaabka leh ayaa ah inuu jiro sagaal sano oo kaliya.
Sheekadiisu waa inay u noqotaa dhiirigelin carruurta ka yar 13, ha quusan, hel fikraddaada oo kala hadal waalidkaa.
1000kii iyo wixii ka badan oo aad aragto, waxaad kasban doontaa inta u dhaxaysa $ 10 - $ 30.
8. Hubi baxay Online banaan shaqo
Waxaa jira tiro badan oo shaqooyin iskood ah oo aad ku lug yeelan karto sidii cunug si aad lacag uga hesho guriga.
Haddii aad ku fiican tahay cod -bixinta, naqshadaha garaafyada, wax -qorista ama xitaa qorista, waxaad baari kartaa goobaha sida Fiverr iyo QorayaashaGig si aad u hesho shaqooyin madaxbanaan.
Waxaad iska qori kartaa Fiverr laga bilaabo da'da 13, wax kasta oo ka hooseeya tan waxay u baahan yihiin waalidkaaga ama mas'uulkaaga inuu xisaabta kuugu shaqeeyo.
Waxaad kasban kartaa ilaa $ 10 - $ 2000 iyo ka badan, iyadoo ku xiran nooca adeegyada aad bixiso.
9. Noqo bulsho warbaahinta/brand Fududeeyaha
Astaantu waa qof la shaqeeya summada oo xayeysiiya waxyaabo ay ka mid yihiin moodada, cuntada, qaab nololeedka, hoteellada, iwm.
Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa fiidyowyada muusikadaada, alaabta carruurtu ku ciyaarto ee aad jeceshahay, safarada meelaha quruxda badan saaxiibbada iyo qoyska.
Saamaynaha caruurtu waxa uu noqon karaa da'yar sida socod baradka ah u furaya alaabada ay ku ciyaaraan caruurta ka weyn kuwaa tijaabiya ciyaaraha cusub, dhajinta sawirada, iyo samaynta waxyaabo kale oo cajiib ah. Shuruudaha da'da ugu yar ee inta badan gacanta warbaahinta bulshada waa 13 sano.
Sameeye ahaan, waxaad dhejin doontaa moodooyinka isbeddellada, isqurxinta, ama wax kasta oo qabow oo aad dareento inay dadku xiiseynayaan. Inta badan, taageerayaal badan, waxaa lagugula soo xiriiri karaa si aad u sameyso xayeysiisyada Noocyada caanka ah oo aad lacag ku hesho ama hel alaab bilaash ah.
Waxaad sidoo kale lacag ka heli kartaa akoonkaaga haddii aad leedahay taageerayaal badan. Waalidiintu waxay maamulaan koontooyinka iyagoo ka wakiil ah saameeyayaasha da'da yar.
Waxaad ku dallaci kartaa magacyada illaa $ 2700 iyo ka badan oo raacsan badan.
10. naqshadaynta T-shaati
Haddii aad jeceshahay naqshadeynta oo aad isha ku hayso moodada, markaa waxaad samayn kartaa naqshado qurux badan oo ku saabsan T-shaati oo iibiso. Soo iibso funaanad maran oo ku samee naqshadahaaga iyaga oo kaashanaya qoyskaaga ama asxaabtaada.
Isku qor goobaha sida Soo iibso iyo Teespring si aad u bilowdo oo haddii aadan gaadhin shuruudaha da'da ugu yar, waalidkaa ayaa ku saxiixi kara magacaaga.
Waxaad heli kartaa $10 – $100 iyo ka badan. Dhammaan waxay ku xiran tahay inta uu le'eg yahay qiimaha alaabtaadu.
XIDHIIDHKA: Funaanadaha Naqshadaynta ee La Iibiyo | 13 Shirkadood oo lacag badan ku siiya 2022
11. Abuur iyo iibiyo Jaantusyada
Carruur badan ayaa jecel farshaxanka iyo sawirada. Haddii aad ku fiican tahay sawirista iyo muujinta qaybo soo jiidasho leh sida jaantusyada majaajilada ah, Animes, iyo sawirrada dhijitaalka ah ee hiwaayad ahaan, waxaad lacag ka bilaabi kartaa adigoo iibinaya.
Si laguu caawiyo, waalidkaa ama mas'uulkaaga ayaa ku siin kara kiniin iyo qalin qalin si aad wax u sawirto, fiiri barnaamijyada sida taranka oo ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan sawiridda.
Waxaad kaloo iska qori kartaa DeviantArt, si aad u iibiso una soo bandhigto shaqadaada. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada si aad u hesho guddiyada iyo sidoo kale bilawga bogga xubinnimada Patreon. Farshaxankaaga waxa loo isticmaali karaa sida stickers, wallpapers, iyo qaar kaloo badan.
On DeviantArt, waxaad kasban doontaa ilaa $ 20 - $ 100.
12. Iibiya Farshaxan iyo Dahabka
Haddii aad jeceshahay samaynta dahabka ama aad isha ku hayso farshaxanimada, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa samaynta iyaga oo ku iibin kara online. Waxay noqon kartaa meel kasta oo laga soo galo silsiladaha gacanta lagu sameeyo, qurxinta kirismaska, xargaha curcurka, iyo qaar kaloo badan.
Si aad u bilowdo, waad iska qori kartaa esty oo ku dheji farshaxanka aad jeceshahay halkaas. Waxa kale oo aad ku wadaagi kartaa gacantaada warbaahinta bulshada si aad u hesho dhagaystayaal badan.
Dakhligaagu wuu kala duwan yahay, iyadoo ku xidhan alaabta aad iibinayso iyo inta aad ka dalacdo. Esty waxa ay kugu dalacaysaa 5% qiimaha iibka
13. Samaynta Music
Haddii aad karti u leedahay samaynta muusiga ama waalid ahaan aad leedahay ilmo karti u leh samaynta muusigga, markaa waxaad ka faa'iidaysan kartaa kartidaada ama waalidkaa ayaa kaa caawin kara taas.
Waxaa jira aalado kala duwan oo aad iska qori karto si ay kuugu fududaato sida Spotify. Spotify wuxuu ku siinayaa inta u dhaxaysa $ 0.03 - $ 0.05 durdur kasta.
14. imtixaanka Apps
Carruurta badankood maalmahan aad bay ugu mashquulsan yihiin adduunka dhijitaalka ah. GenZ badan ayaa waqtigooda ku bixiya sahaminta internetka iyo hubinta barnaamijyada cusub.
Waxaad lacag ka samayn kartaa guriga adiga oo yar oo tijaabinaya barnaamijyo cusub. Baadhid Cod -bixiyeyaasha iyo Tijaabiyaha kuwaas oo ah qaar ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo. Celcelis ahaan waxaad kasban doontaa $ 10 20kii daqiiqo.
15. Iibiya Isticmaalo/ jir Items online
Haddii aad haysato walxo badan oo duug ah oo aanad isticmaalin oo ay wali ku jiraan xaalad aad u wanaagsan, waad iibin kartaa si aad lacag u samayso. Waxay noqon kartaa alaabta lagu ciyaaro, dharka, kabaha, iwm.
Hubi inay dhammaantood qaab wanaagsan yihiin oo weliba raadi oggolaansho waalidkaaga ka hor intaadan iibin.
Fiiri goobaha sida Arbacada ah, Amazon, PoshMark, iyo Craigslist si aad u iibiso alaabta aad isticmaashay.
Isku qor mid kasta oo aad doorato, samee akoon, sawir ka qaad alaabtaada oo dheji. Dooro qiimo si fiican kuugu shaqaynaya laakiin aan ku dallacaynin alaabta. Dakhligaagu wuxuu u dhexeeyaa $25 iyo ka badan, waxay ku xidhan tahay shayga aad iibinayso.
U -bandhigidda carruurtaada siyaabo sharci oo kala duwan oo lacag looga helo guriga oo lagu hago sida loo maro waa hab weyn oo lagu dhisi karo mustaqbalkooda.
Tani waxay ka dhigi doontaa mid dhaqaale ahaan u madaxbannaan waxayna ka caawin doontaa inay maareynayaan dhaqaalahooda inta ka dambeysa nolosha.
Qaar ka mid ah shabakadaha internetka ee ku taxan maqaalkan ayaa leh shuruudaha da'da ugu yar ee aan ka yarayn 13 sano, tani waxay u muuqan kartaa rajo la'aan carruurta yaryar laakiin waalid ahaan ama mas'uul ka ah oo xiiseynaya mustaqbalka carruurtaada oo raba inuu dhiirigeliyo, waa Waajibkaga inaad ka caawiso meelaha dhibtu ka jirto, sida akoonada u samaynta iyaga oo wakiil ka ah.
Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay 15 ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee sharciga ah ee lacag looga helo sidii ilmo guriga ka yimid.
Samee lacag sida ilmo
Siyaabo fudud oo ay carruurtu lacag ku helaan
Saameeyayaasha Ugu Sarreeya ee Ilmaha Waa inaad raacdaa
Sida Loo Joojiyo DirecTV Adigoon Indho Indho | Talaabooyinka Fudud
Kadib iibsashada DirecTV $ 49 bilyan sanadka 2015, AT&T ayaa la sheegay inay soo bandhigeyso dalabyo lagu qiimeeyo…
Haddii aad jeceshahay daawashada filimada hadda iyo ka dib ama inta lagu jiro waqtiga firaaqada, markaa waxaa laga yaabaa inaad seegtay…
Safarka 10 sano wuxuu qaadan karaa 6 bilood haddii aad hesho qof soo maray…
Sida wax loogu iibiyo Depop: Hage tallaabo-tallaabo ah
Si aad u tijaabiso sida wax loogu iibiyo hagaha Depop, waxaad u baahan tahay inaad is-diiwaangeliso, ka hor inta aanad is-diiwaangelin, waxaad...
Buugaagta Is-Caawinta Bilaashka ah ee Kobcinta Ganacsigaaga | 2022
Runtu waxay tahay in qof walba leeyahay jadwal daryeel oo kala duwan oo iyaga ugu fiican. Qaarkood, waxay…
10ka Kanaal ee ugu Wanaagsan YouTube ee Barashada Sayniska Xogta
10ka kanaal ee ugu sarreeya Youtube ee riwaayadaha Kuuriya 2022